2 Korintiana 5 - Ny Baiboly
Epistola Faharoan'i Md. Paoly Ho An'ny Koritiana
2 Korintiana toko 5
Maniry hiala amin'izao fiainana izao izy mba hiaraka amin'ny Kristy - Manery azy mafy ny nitiavan'ny Kristy antsika.
1Fantatray fa rahefa rava ity trano lay itoeranay eto an-tany ity, manan-trano tsy nataon-tànan'olona, fa narafitr'Andriamanitra izahay, dia trano haharitra mandrakizay any an-danitra. 2Koa misento ao anatin'ity izahay, fa maniry mafy hitafy ny tranonay avy any an-danitra, 3raha mbola hita mitafy anefa izahay, fa tsy mitanjaka. 4Satria raha mbola amin'ity trano lay ity koa izahay, dia misento, fa maniry ny tsy hoendahana, fa hitafy ny hafa koa ambonin'ity, mba hatelin'ny fiainana ny mety maty. 5Ary tsy iza no namboatra antsika ho amin'izany, fa Andriamanitra izay efa nanome antsika ny santatry ny Fanahy ihany.
6Koa noho izahay manana mandrakariva izany toky izany, sady mahalala fa lavitra ny Tompo izahay raha mbola mitoetra amin'ny vatana koa 7(satria finoana moa no andehanantsika, fa tsy fahitana), 8dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala amin'ny vatana, mba hitoetra eo akaikin'ny Tompo. 9Ary izany ihany koa no ikelezanay aina mba hankasitrahan'ny Tompo, na mitoetra amin'ny vatana izahay na miala aminy. 10Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy hiseho amin'ny fitsaran'ny Kristy mba handraisantsika tsirairay avy izay tandrifin'ny asantsika fony mbola tao amin'ny vatana, na soa na ratsy izany.
11Koa noho ny fanananay fahatahorana ny Tompo no itadiavanay hampiaiky ny olona; fa Andriamanitra moa dia mahalala anay mazava, ary hianareo koa dia ataoko fa mahalala anay ao amin'ny konsiansinareo. 12Tsy midera tena aminareo izahay, fa manome anareo izay ho azonareo hararaotina mba hireharehanareo ny aminay, sy hahazoanareo mamaly izay mitady voninahitra amin'ny fisehoana fotsiny, fa tsy amin'ny ao am-po; 13dia izao: very saina moa izahay, ho an'Andriamanitra; mitombin-tsaina kosa indray, ho anareo. 14Fa terin'ny fitiavan'ny Kristy antsika izahay, satria fantatray marina fa maty ho an'ny olona rehetra ny olona iray, ka dia maty koa izy rehetra; 15ary maty ho an'ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay maty sy nitsangana ho azy ireo.
16Koa dia tsy mahalala olona araka ny nofo intsony izahay; ary na dia nahalala ny Kristy araka ny nofo aza izahay; dia tsy araka izany intsony no ahalalanay azy ankehitriny. 17Noho izany, na iza na iza ao amin'ny Kristy, dia zava-boary vaovao izy, ka lasa ny zavatra taloha, fa indro tonga vaovao ny zavatra rehetra. 18Ary tsy iza no nihavian'izany zavatra rehetra izany, fa Andriamanitra, izay nampihavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Jesoa-Kristy, sady nanome anay ny fandraharaham-pihavanana; 19satria Andriamanitra no nampihavana an'izao tontolo izao aminy indray, tamin'ny alalan'i Jesoa-Kristy, ka tsy nitana ny fahotan'ny olona, sy nametraka ny teny fampihavanana taminay. 20Koa sady solon'ny Kristy àry izahay no irak'Andriamanitra koa, ka tahaka an'Andriamanitra no mananatra, sy toy ny tenan'ny Kristy no mihanta aminareo hoe: Mihavàna re amin'Andriamanitra hianareo! 21Fa he ity izy: Ilay tsy nahalala ota, dia nataony ota ho antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika! >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0049 seconds